အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ဘဝ ရဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်
သတိရမိသေးတယ်။ ငယ်ငယ်က ဆို ဘာမဆို စားချင်တယ်၊ ခုံခုံမင်မင် လဲရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တောင်ငါတော်တော်ငတ်တာပဲလို့ထင်ခဲ့သေးတယ်။ သိပ်မစားရဘူးလေနော်။ ငယ်ငယ်ကဆို အမေက မုန့်ဖိုးလဲသိပ်မပေးဘူး။ ဘာပဲ စားရ စားရ သိပ်ကောင်းတယ် လို့ထင်တယ်။ လူကြီး သိပ်ဖြစ်ချင်တာလေ။ မြန်မြန်ကြီး မြန်မြန် အလုပ်လုပ် မြန်မြန်ပိုက်ဆံရှာ ကိုယ်စားချင်တာ ဝယ်စား ကြိုက်သလောက်စား အသေစား။ အဲ့လိုနေချင်ခဲ့ဘူးတာလေ...
based onaforwarded email sent byafriend.
Posted by တီချမ်း at 10:47 AM
crystal March 17, 2011 at 12:46 PM
ခုတလော ဒီအကြောင်းတွေ သိပ်ကို တွေးဖြစ် ဆွေးဖြစ်နေတယ်ဟာ...
အန်တီချမ်း March 17, 2011 at 1:00 PM
တိုးဂိုက် လုပ်တုံးက အိုကြီး အိုမတွေနဲ့ ဆို ပိုဆိုးတယ်
တိုးထွက်ရင်လဲ ဆီးသွားဖို့ ခဏခဏ ရပ်ပေးရတယ်
ပဲခူးဆို ၄ ခါ အနည်းဆုံးပဲ
မြန်မာပြည်က ကားတွေကလဲသိတဲ့ အတိုင်း ဒီက ကားတွေလို အိမ်သာမပါ
Vista March 17, 2011 at 1:47 PM
အလုပ်လုပ်လိုက် ခွင့်ယူလိုက် ခရီးသွားလိုက်လုပ်မှပဲ ဟိဟိ
အန်တီချမ်း March 17, 2011 at 1:53 PM
နောက်လထဲမှာ အစိုးရက သင်္ကြန်အပတ် ကို တပတ်လုံးပိတ်မယ်
၆ ရက်နေ့ကလဲ ပိတ်မယ်ဆိုတော့
ခွင့် ၄ ရက် ယူလိုက်ရင်
နှစ်ပတ် အပြည့် ပလပ်စ် စနေ တနင်္ဂနွေ ၃ ပတ်တွဲရမယ်
ဧပရယ် ၂ ရက်နေ့မှ သည် ၁၇ ရက်နေ့ထိ
Snow March 17, 2011 at 2:57 PM
အခုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုပြီး ရေးတာ ပြန်ဖတ်ချင်သည်။
ပျော်စရာ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ စာတွေ (ဟင်းချက်ခြင်း အပါအဝင်) ဖတ်ချင်သည်။
အန်တီချမ်း March 27, 2011 at 8:04 PM
Aye Myat Myat Ko likes this.
Nang Nyi အဲ့ဒါ.. ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်..
March 17 at 11:26am · LikeUnlike
Addy Chen မတိဘူး လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်က ကြယ်သူမလေးလိုပဲ မွေးနေ့တွေ လုပ်ပြီး ဝက်ဝံ ရုပ်တွေ ညာယူကြတာပေါ့အေ
March 17 at 11:34am · LikeUnlike
Nang Nyi တိန် ! ဘာမှကို မဆိုင်ဝူး.. :P
March 17 at 11:38am · LikeUnlike
Sweetpeony Peony ဟင့်.. တီပြောမှ အားငယ်လိုက်တာ.. ခုပဲ ခရီးထွက်ရမလား.. အဲ မဖြစ်သေးပါဘူး.. ရေဒီရေးရှင်းတွေနဲ့.. ဒါဆို ထုပ်စီးတိုးတို့ ခိုတို့ ပြန်ကစားရမလား.. ဟင်.. လူတွေလဲ မရှိတော့ဘူး ကစားဖို့.. ဘာလုပ်ရမှန်းတောင် မသိဘူး..း(
March 17 at 12:51pm · LikeUnlike
Addy Chen အဲ့လိုတွေးဖို့တောင် ဆယ်စုနှစ် ၂ခု စာလောက်နောက်ကျနေခဲ့ပြီ ဘိန်းပန်းချိုရေ
March 17 at 1:06pm · LikeUnlike
Ei Ei Khin ကိုယ်တို့ အတွက်တော့ အချိန်တွေလဲ ကုန်ခဲ့ပြီ။ ငွေကလဲ မရှိသေး။ အင်အားလဲ မရှိတော့ ... ဘယ်အဆင့်ထဲ ထည့်ရမှာပါလိမ့် ...
March 17 at 2:10pm · LikeUnlike
Addy Chen ၂ဆင့်ခွဲ
Addy Chen မဟုတ်သေးဘူး
၁ ဒဿမ ၇၅ ဆင့် ခိခိ
March 17 at 2:11pm · Like